မွန်ဂို - ဝီကီပီးဒီးယား
မွန်ဂို (မွန်ဂိုးလီးယား: Монголчууд, ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠴᠤᠳ မွန်ဂိုချူး) သည် အရှေ့အာရှ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစု ဖြစ်ပြီး မွန်ဂိုလီးယား နှင့် တရုတ်၏ အတွင်းပိုင်းမွန်ဂိုလီးယားကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတို့တွင် အဓိကနေထိုင်ပါသည်။ ၎င်းတို့သည် တရုတ်ပြည်တွင်းပြည်ပ၌ (ဥပမာ စင်းကျန်းပြည်နယ် )၊ ရုရှားတို့တွင်လည်းတိုင်းရင်သားလူမျိုးစုငယ်အနေဖြင့် နေထိုင်ကြသည်။ Buryat နှင့် Kalmyk ခွဲများမှ မွန်ဂိုလူမျိုးများ သည် ရုရှားဖက်ဒရယ်နိုင်ငံ Buryatia နှင့် Kalmykia တွင်နေထိုင်ကြသည်။ တစ်ခေတ်က ဝင့်ကြွားနိုင်ခဲ့သော အာရှအလယ်ပိုင်းသားများ အာရှတိုက် အလယ်ပိုင်း၌ နေထိုင်သော မွန်ဂိုလူမျိုးများသည် မြင်းစီးအတတ်၌ ကျင်လည်၍ အတိုက်အခိုက်၌ ဝါသနာပါသူများလည်း ဖြစ်၏။ တစ်ဆယ့်သုံး ရာစုနှစ်တွင် မွန်ဂိုစစ်ခေါင်းဆောင်များသည် ကမ္ဘာ့သမိုင်းတွင် အံ့ချီးဖွယ်ရာတစ်ရပ်အဖြစ် မှတ်တမ်းတင်ရလောက်အောင် အာရှတိုက် တစ်တိုက်လုံးနီးပါးမျှနှင့် ဥရောပတိုက်သို့ ချီတက် တိုက်ခိုက် အောင်မြင်ခဲ့သည်။
တိဗက်ဗုဒ္ဓဘာသာ Minority en:Mongolian shamanism (en:Tengrism), en:Eastern Orthodox Church, en:Protestantism
en:Proto-Mongols, en:Khitan people, en:Mongolic peoples
↑ Excluding Daurs (Demographics of China)
↑ Demographics of Mongolia
↑ 2,986 Mongols proper, 461,389 en:Buryats, 183,372 Kalmyks, 3,608 Soyots (en:Russian Census (2010))
↑ Number of foreigners in Korea up for 1st time in 20 months
↑ ၅.၀ ၅.၁ ၅.၂ ၅.၃ ၅.၄ ၅.၅ ၅.၆ ၅.၇ 2020 Population and housing census of Mongolia။ National Statistical Office of Mongolia။
↑ T13 Cizinci podle typu pobytuapohlaví - 25 nejčastějších státních občanství k 30. 6. 2020 (in Czech)။
↑ Bevölkerung nach Staatsangehörigkeit und Geburtsland (in de)။ Statistik Austria (3 July 2014)။
↑ National Bureau of Statistics of the People's Republic of China (April 2012)။ Tabulation of the 2010 Population Census of the People's Republic of China။ China Statistics Press။ ISBN 978-7-5037-6507-0။ 2013-02-19 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Bira 2011.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=မွန်ဂို&oldid=724678" မှ ရယူရန်
၁၀ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၀၂:၅၆ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၁၀ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၀၂:၅၆ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။